काठमाण्डु खाल्डो र पैचिङ्गको हिउँ - China Radio International
काठमाण्डु खाल्डो र पैचिङ्गको हिउँ
(GMT+08:00) 2017-01-09 15:09:21
हुन त विश्वमा नेपाल अनेकन् कारणले चर्चित छ। त्यस्तै नेपाल सर्वोच्च (माउण्ट एभरेष्ट) सगरमाथाको देश र हिमालैहिमालको देशको नामले पनि सुपरिचित छ। यस्तो हिम श्रृंखलाको देश नेपाल भए तापनि सबै आमनेपालीले हिउँ नदेखेका/नछोएका पनि हुनसक्छन्। हाल आन्तरिक पर्यटनले गति लिएता पनि अझै पनि सारा नेपालीले हिउँ छोएका छैनन्, देखेका छैनन्। अनि हिउँका गोला पनि खाएका छैनन्। (केही वर्षअघि समाचारमा पढेको थिएँ कि जुम्लामा हिउँका गोला पाँउअचारको रुपमा बेचियो रे।)
अनि यो हिउँ मन नपराउने विरलै होला, यो संसारमा। हिउँ हेर्न, खेल्न र यस्तै रमिता गर्न वर्षेनी मानिसहरू हिउँदको पर्खाइमा हुन्छन्। साथै हिमाली भेगका लागि हिमपातले कष्ट दिए तापनि हिम भने मनपराउँदा हुन्। बच्चादेखि वृद्धवृद्धालाई हिउँले आकर्षित गर्दैआएको छ। अनि यसै बीचको एक म। मेरो चाहना, रुचि किन फरक हुन्छ र ? मलाई भने हिउँ परेको हेर्न अझै रमाइलो लाग्छ। मलाई अझै सम्झना छ, मुक्तिनाथ जाँदा बाटोमा फुस-फुस हिउँ परेको, कपास जस्तै। यो वि.स. 2047 सालको कुरा हो। शायद यो नै मेरो पहिलो प्रत्यक्ष अनुभव हुनुपर्छ। तर त्यति बाक्लो हिउँ त परेन त्यस बेला। साथै राती राखेको तातो पानीको गिलास भने बिहान पुरै एक ढिक्का जमेको थियो। यस्तै पानी जमेर बनेको बरफ त पहिले घरको कौसीमा राखिएको गिलास लगायतकामा जमेको देखेको थिएँ, पछि-पछि तुषारो मात्र पर्थ्यो। साथै काठमाण्डुमा थाहा पाउने गरि हिउँ परेको भन्ने सुनेको 2063 फाल्गुन3गते थियो। बबरमहल लगायत केही ठाउँमा हल्का हिउँ परेको थियो रे।
काठमाण्डु खाल्डोमा हिउँ नपरे पनि चारैतिरबाट घेरेको पहाडमा भने हिउँ पर्ने गर्छ र यसै हिउँदको बेलामा फुल्चोकी, दामन, नगरकोटमा पछि-पछि धेरै धेरै हिउँसँग खेलियो पनि। नगरकोट, धुलीखेल त त्यसै पनि गइरहने ठाउँ हिउँ पर्दा नजाने कुरै भएन तर दामनको यात्रा कथनीय छ।
त्यस ताका देशको विभिन्न गाउँशहरमा कर्फ्यु लाग्थ्यो। धेरै कष्ट थियो आममानिसलाई। हुन त अहिले पनि कताको सुख मिलेको छ र ? मानिस आफैआफैमा रुमलिएका छन्। भुल्न चाहेका छन् दुःख र पीडालाई। हामी अल्लारेहरू भने रमाइलो गर्न हिँडेका थियौं। हामीले दामनमा मनभर्ने गरी नै हिउँ खेल्यौं, हेर्‌यौं। मनोरम दृश्यको रस्वादन गर्‌यौं। बाटोमा गाडि तथा मोटरसाइकलको चक्का चिप्लिने सामान्य थियो तर यस कुरामा सबै सतर्क हुनु जरुरी छ। सतर्कतालाई छोडेर अगाडि बढौं, हामी साथीभाइले दामनको भ्रमणपछि हेटौंडा जाने निधो गर्‌यौं र बाटोमा ठाउँ-ठाउँमा चेकिङ्ग अनि हेटौंडामा कर्फ्यु लाग्ने समयअगावै पुग्नुपर्ने बाध्यता। जे होस् हामी पुग्यौं। तर निकै त्रसित थियो वातावरण।
यस्तै जिरी जाँदा पनि हामी साथीभाइ हिउँ खेल्न चेर्दुङ्ग पहाड चढेकाथ्यौं। त्यस बखत रात त्यसै चेर्दुङ्गमा बिताएर भोलिपल्ट फर्कँदा हामी बाटो भुलेर झण्डैझण्डै रामेछाप पुगेका थियौं। यसरी हिउँ हेर्न र खेल्नलाई मैलै साथीभाइसँग मिलेर धेरै जोखिम मोलेको छु। तर जिरीको चेर्दुङ्ग चढाइ पनि कहिले नभुल्ने एउटा मिठो याद बनेको छ। त्यस्तै-त्यस्तै धेरै-धेरै ठाउँमा अनुभव गरियो।
कोल्टीबाट रारा ताल अनि डाँफे भीर हुँदै जुम्ला झर्दाको अर्को न्यानो याद बसेको छ। तर हामीसँग यत्रो हिमाल र पहाड हुँदाहुँदै पनि यहाँ स्की खेल्ने लगायत हिउँसम्बन्धी खेल केही पनि छैन। हिउँसम्बन्धी खेलको पुर्वाधार बनाउन पनि कसैले ध्यान दिएको छैन। शायद म जस्तै हाम्रा नेतादेखि धनाढ्यहरू सबैले रारा पुग्दा योजना र सपना चाँही बुने होलान्। हामीले पनि विन्टर ओलम्पिक आयोजना गर्नुपर्ने हो तर हामीसँग हरेक कुराको अभाव छ। त्यसमा समावेश खेल त नौलो नै भए तर हाम्रो कुनै हिउँ-खेल पनि छैन। अभाव, नहुनु र छैनले गरीब, गरिबी बुझाउंछ।
जे जस्तो भए तापनि नेपालको धेरै ठाउँमा हिउँसँग भने खेलियो। यहाँ खेल्नु भनेको त्यही हिउँ छुनु, हिउँको डल्लाले हिर्काउनु या लडीबुडी गर्नुसम्म हो। हिउँ बाक्लो भए तापनि कहिले हिममानव बनाइएन। अरु केही बनाउने चेष्टा पनि गरिएन।
यसरी हिउँ भनेपछि फुरुङ्ग हुने म पैचिङ्गको बसाइमा हिउँलाई कुल्चेर, टेकेर ओहोरदोहोर गर्नुपर्दा त खुशी सगरमाथाझैं उच्च बनेको छ। हुन त यहाँ पैचिङ्गमा पनि हिममानव बनाउने काम भने गरिएन तर ठाउँ-ठाउँमा त्यस्ता हिममानव बनाएर राखेको भने हेर्दैआइरहेको छु। यो पैचिङ्ग अजिब छ गर्मीमा चालिस डिग्री सेन्टिग्रेड पुग्छ भने जाडोमा माइनस दश-बाह्रसम्म मैले नै झेलेको छु। यहाँ न्युनतम तापक्रम माइनस बीस सेन्टिग्रेडसम्म रेकर्ड गरिएको छ। खासै भन्नुपर्दा जाडो याम पाँच-छ महिनाजस्तै हुन्छ तर हिउँ पर्ने भनेको तीन या चार पटक मात्र हो। कहिले नभेम्बरमा नै पर्छ त कहिले जनवरी फेब्रवरी नै कुर्नुपर्छ र अब जाडो सक्यो भन्दाभन्दै पनि मध्य मार्चसम्म पनि हिउँ परेको आफैले भोगेको छु। कहिले हिउँ बाक्लो पर्छ र महिनौं दिनसम्म पनि जमिरहेको देख्नपाउंछौं र सडक छेउमा थुपारिराखेको हुन्छ। तर कहिलेकाँही बिहान हिउँ परेको हो र भन्नुपर्ने पनि हुन्छ। सबै विलिन हुन्छ दिउँसोको घामसँगै। यही प्रसङ्गमा मलाई एउटा कुरा जोड्न मनलाग्यो कि घरमा बसेर हेर्दा बाहिर मजाले घाम लागेको देखिन्छ र चिसो पटक्कै छैन भन्ने भान हुन्छ तर बाहिर कडा घाम नै भए पनि साइबेरियाको हावाले सातोपुत्लो उडाइदिन्छ। कठ्याङ्ग्रिने जाडो, बेकम्मा सूर्यको ताप अनि भन्न मनलाग्छ, झूठो घाम!
भनिहालें पैचिङ्गमा हिउँ त्यति सारो पर्दैन तर नपर्ने पनि होइन। पर्दा कहिले हल्का कहिले त मजाले पर्छ र यसै हिउँको वर्षासँगै पैचिङ्गको विभिन्न ठाउँहरू जस्तै ऐतिहासिक थ्येन अन मन, ग्रेटवाल, समर प्यालेस अनि यस्तै अरु पार्क तथा पैचिङ्ग वरपरको क्षेत्र घुम्नु निकै नै रमणीय हुन्छ। पैचिङ्गको दाँजोमा कछाड क्षेत्रमा हिउँ बाक्लो पर्नुका साथै दृश्य पनि निकै नै सुन्दर देखिन्छ। साथै हिउँदमा शुन्यभन्दा मुनिको तापक्रम भइरहेबाट पैचिङ्ग शहर र वरिपरिका नदी तथा तालहरू सबै जमेका हुन्छन्। सम्मर प्यालेस, बेहाई पार्क यस्तै–यस्तै अनगिन्ती पार्कका ताल अनि पोखरीहरु सबै जमेका हुन्छन्।
कहिले उदेक पनि लाग्छ आफू पनि हिउँदको पैचिङ्ग जस्तै थिर हुन्छु। एकदमै जम्छु। तर यस्तै भए तापनि यस ताल र पोखरीमा रमिता लागेको हुन्छ र यसै बेला नै चीनको नयाँ वर्ष लाग्ने समय पनि हो, छुनचेको पर्वोत्सव हो साथै यसै बेला यहाँ टेम्पल फेयर (म्याउ हुइ) पनि लागेको हुन्छ। त्यस जमेको पोखरी र तालमा कार्ट स्की या स्लेड, आइस स्केटिङ्ग खेल्न बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्मको लर्को लागेको हुन्छ। मैले पनि अरु चिनियाँसरह स्लेड पनि खेलें। यो विशेषत बालबच्चाका लागि हो तर मैले आनन्द उठाउने मौका गुमाइन। अनि ठूलाका लागि या युवा तथा व्यवसायिक तवरले स्कीइङ र स्की बोर्ड खेल्न पनि ठाउँ–ठाउँमा स्की रिसोर्टहरु छन्। पैचिङको विशेषत उत्तर र पूर्वी क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरका स्की रिसोर्टहरू धेरै छन् त्यस बाहेक सानाठूला खालका अरु पनि धेरै छन् पैचिङमा। यस्ता कतिपय स्थलहरूमा असली मात्रै नभइ नक्कली हिउँ राखेर समेत खेल खेलाइने रहेछ भन्ने पनि जानियो।
रारा तालको यात्राको क्रममा यस्ता विचारहरू पलाएको थियो, डाँफे भीरबाट जुम्ला झर्दा स्की गरेर झर्न पाए कति हुन्थ्यो भन्ने कल्पेको थिएँ। यसैबीच हामीले विन्टर ओलम्पिकका लागि पहल गर्नसक्ने र त्यस्तै पूर्वाधारको संरचना निर्माण गर्नसक्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यो हामी सहयात्रीबीच सिमित रह्यो। (हाल त्यस्ता पूर्वाधार बन्दै र कतै सञ्चालनमा आए भन्ने पनि सुनें।)
अनि मैले यता आएर टिभी र फिल्ममा मात्र देखिएको खेलको अनुभव पनि सङ्गाले। स्कीको ज्याकेट, ट्राउजर र स्की जुत्ता लगाइ त्यो दुई वटा मसिनो फल्याकजस्तोमा छिराएर स्टिक बोकी स्की खेलियो। हिमाली काखमा जन्मेको म अबोधले पहिलो पल्ट किशोरावस्था पनि पार गरेर अधवैँसे उमेरमा स्कीको स्वाद लिएँ। साथै यहाँ प्राय स्की रिसोर्टहरुमा बेफुर्सदिलाहरुका लागि बत्तीको उज्यालोमा साँझमा खेल्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको पाइन्छ।
अनि स्की खेल कौशल आफ्नो क्षमता अनुसार कतिसम्म भिरालोमा खेल्ने भन्ने हुँदोरैछ। ओरालो झर्न जति भयानक छ खेल कौशलता पनि त्यहीँ देखिन्छ। हिमाली छोरो, धेरै पटक बल्ड्याङ्ग पनि खायो।